भोली देखि कोभिडविरुद्धको खोप पत्रकारलाई पनि लगाउने - Rastrakokhabar
भोली देखि कोभिडविरुद्धको खोप पत्रकारलाई पनि लगाउने
२५ माघ २०७७, आईतवार ०७:३२
काठमाडौं, २५ माघ । कोरोनाको महामारीका बीच खटिएर जनतालाई सुसूचित गराउने काममा सक्रिय रहेका पत्रकारहरुलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोप उपलव्ध गराउने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकताको सूचीमा पत्रकारलाई पनि थपेका हुन् ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबारबाट खोप केन्द्रहरुबाट पत्रकारहरुलाई खोप लगाउन थालिने सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ राजेन्द्र मानन्धरले जानकारी दिएका छन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्यकर्मीपछि सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको पालो आएको जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार सूचना विभागद्वारा वितरित प्रेस पासका आधारमा सञ्चारकर्मीलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ ।
यसअघिदेखि नै सरकारले सरसफाई कामदार, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरुलाई खोप लगाउन थालिसकेको छ ।
Next Post	आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ माघ २५ गते, आइतवार)